Nkwakọ ngwaahịa Recyclable, Compostable Packaging, mgbanwe Packaging - EVERGREEN
EVERGREEN ngwugwu NA Mbipụta CO., LTD
Nkwakọ ngwaahịa Recyclable
Mpempe akwụkwọ akara akara akụkụ 3 enwere ike imegharị ya
Akpa akpa dị larịị
Mpempe akwụkwọ nkwụnye akpaghachị
Mpempe Gusset Akụkụ Recyclable
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa Recyclable
Ndị na -ezipụ ozi
Nkwakọ ngwaahịa Recycled & Recyclable
Nkwakọ ngwaahịa Compostable
Nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe
Akara Akụkụ 3 & obere akpa agụụ
Obere akpa ala
Obere akpa nzaghachi
Akpa Gusset na obere akpa akara Quad
Obere akpa guzoro
Akpa akpa dị nkọ
Ọtụtụ afọ nke ahụmịhe emeela ka nkwakọ ngwaahịa Jiahe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwee ike ịnye azịza teknụzụ kachasị elu na ngwugwu enwere ike imegharị ma na-adigide. Karịsịa ọhụrụ ewepụtara ọtụtụ akwa akwa ihe mgbochi PE nwere ike dochie ọtụtụ PET na obere akpa mkpuchi, na -eme ka 100% nwegharịa. Ọ na-enye ezigbo mmiri mmiri, nchedo gas na ihe mgbochi ihe na-esi ísì ụtọ, emebere ya iji nye ndị nwe akara aka ịdị ogologo ndụ, na-enyere aka mee ka ngwaahịa dị ọhụrụ. A na -ejikarị ya maka ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa dịka nri, ihe ọ beụ ,ụ, nri anụ ụlọ, ihe ntecha, na nlekọta onwe onye, ​​nlekọta ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Akpa obere akpa anyị na-emegharị emegharị nke na-eji arụmọrụ nkwakọ ngwaahịa kacha mma na akara ngosi How2Recycle na-ejikọ akara ngosi gị na gburugburu gị. Akara ngosi na -agwa ndị na -azụ gị n'ụzọ doro anya ka enwere ike isi megharịa nkwakọ ngwaahịa ahụ na US na Canada ..
Mkpa ahụ maka obere akpa 100% zuru ezu
Plastik na -adịte aka, dị fechaa ma dịkwa ọnụ ala.
Enwere ike ịkpụzi ha ngwa ngwa n'ime ngwaahịa dị iche iche nke na -achọta ojiji n'ọtụtụ ngwa. Kwa afọ, a na -arụpụta ihe karịrị nde tọn plastik 100 n'ụwa niile. Ihe dị ka ijeri pound narị abụọ nke ihe ọhụrụ plastik ka etinyere, na -afụcha ya, kpuchie ya ma tinye ya n'ime nde ngwugwu na ngwaahịa. ọzọ na -adigide, nkwakọ ngwaahịa Jiahe ewepụtala obere akpa polyethylene (PE) 100%.
Ngwọta ahụ na -eji naanị otu akụrụngwa n'ime ihe owuwu ya, polyethylene, ihe na -eme ka nrụgharị ya dị mfe ma na ọkwa mbụ na mgbe oriri, ebe ọ bụla enwere yinye, ọ ga -ekwe omume iji akara mgbazigharị mba ofesi: 4 (LDPE) kama 7 (ndị ọzọ), na -anọchite anya uru maka yinye nrụgharị niile.
Ka anyị mee ka ndụ baa uru: Akpụ ọhụrụ anyị na -emegharị emegharị bụ ịwụli elu n'ime ime ka nkwakọ ngwaahịa rọbaị na -agbanwe agbanwe bụrụ eziokwu. Maka ndị mmadụ maka mbara ala, ọ dị mma maka gburugburu ebe obibi, ka mma maka azụmahịa.
Mpempe akwụkwọ nri
Akpa akpa emegharịgharị na emegharịgharị
Ụdị ọ bụla nke obere akpa eji emepụtagharịa nke ụlọ ahịa anyị na-emezu ihe achọrọ maka How2Recycle® mmemme dobe ụlọ ahịa2. Soro usoro anọ a dị mfe iji mezue usoro imegharị ihe.
1.Jide n'aka na obere akpa bụ ihe efu
2.Michaa ihe ọ bụla rụrụ arụ ma ọ bụ ihe fọdụrụ na nri
3. Wepu mmiri ọ bụla fọdụrụ n'ime obere akpa
4.Gaa na ụlọ ahịa mpaghara gị na -ekere òkè
Akara na ụlọ ọrụ ndị nwere mmasị iji obere akpa anyị nwere ike imegharị ga -abụ ndị otu How2Recycle® chekwaa mmemme dobe iji jiri akara ahụ dị n'obere akpa ha ebipụtara.
Maka ịjụ maka ngwaahịa anyị ma ọ bụ onye na -ere ahịa ọnụ ahịa, biko hapụ anyị ka anyị ga -akpọtụrụ n'ime awa 24.
Akwụkwọ akụkọ anyị, ozi kacha ọhụrụ gbasara ngwaahịa anyị, akụkọ na onyinye pụrụ iche.
Ekele dịrị akpa a na -emegharị emegharị na Evergreen Pack, ọ na -enyere anyị aka inwe nzọụkwụ ọzọ na nkwakọ ngwaahịa na -adigide.
Akpa ya dị elu nwere ike imegharị akpa PE/PE dị egwu n'ezie!
Ngwọta nkwakọ ngwaahịa nwere nnukwu ihe mgbochi wepụrụ nchegbu anyị ruo oge nchekwa ma nyere anyị aka ịgbanwe akpa anyị niile ka ọ bụrụ ụdị emegharị.
Daalụ maka mbọ gị iji nye ụlọ ọrụ anyị ngwọta nkwakọ ngwaahịa na -adigide.
Akpa PE/PE juru anyị anya nke ukwuu; magburu onwe -ebi akwụkwọ, ezigbo n'akụkụ akara, ewepụghị mkpọchi uwe na doro anya window. Akpa kacha emegharị emegharị nke anyị hụtụrụla!
Ọ bụrụ na ịchọrọ azịza nkwakọ ngwaahịa na -adigide, anyị na -atụ aro Evergreen Pack mbụ.